Kitapo fitehirizana vatam-pitaterana seza aoriana: boaty fitehirizana seza aoriana azo aforitra, mety amin'ny fiara, kamiao, kamiao pickup, jeeps na SUV-boaty fitehirizana fiara lehibe sy boaty kitapo fivarotana.
Boaty fitahirizana fiara
Ny vokatray dia miavaka amin'ny famolavolana, zavatra maro ary mora ampiasaina. Ny modely tsirairay dia vita amin'ny tanana sy mateza, izay manampy amin'ny fanamorana ny fiaranao. Vita amin'ny fitaovana tsara indrindra ihany ity mpanofana vatan-kazo mavesatra ity, satria manantena izahay fa afaka mankafy izany ianao ao anatin'ny taona vitsivitsy. Izy io dia vita amin'ny polyester 600 denier. Noho ny rindrin-drindriny matanjaka sy ny takelaka ambany, dia maharitra sy mafy be izy io, ary hitazona ny endriny.
Na mandefa ny zanakao any an-tsekoly ianao, mandehana any amin'ny fivarotana entana haka zavatra haingana na manatrika fivoriam-barotra, ireo raharaha isan'andro rehetra ireo dia mitaky anao hitahiry zavatra ao anaty fiara. Ankehitriny, ny olana fotsiny dia ny zavatra ao ambadik'izany dia mety hikorontana be, izay mety mitovy amin'ny faritra misy loza. Leo ve ianao amin'ny fiparitahana sy ny fikorontanana izay mora miakatra ao amin'ny vatan'ny fiaranao? Tsy misy mahasosotra kokoa noho ny mandre ny entam-barotra rehetra nariana tao anaty vata teny an-dalana. Raha izany no izy dia mila mpikarakara backbone ianao! Ny tena mpikarakara dia manana efitra lehibe malalaka, izay mora handraisana kojakoja isan-karazany. Ny paosy harato ivelany sy ny paosin'ny flap dia ampiasaina hitehirizana zavatra kely kokoa. Ankehitriny dia tsy mila mamadika zavatra maro ianao vao mahita ny toerana nandevenana azy. Rehefa tsy mila mpikarakara ianao dia azonao atao ny manova azy ho kitapo ho fitahirizana. Ny famenoana ny vatan-kazo dia vita amin'ny lamba Oxford 600D avo lenta, ary ny rindrina sisiny sy ny takelaka ambany dia tena matanjaka, izay mahazaka ny ankamaroan'ny scratches ary mitazona ny rafitra matanjaka, tsy misy olana! Ny fiara madio dia fiara mahafaly! Koa aza miandry, tadiavo ny tena mpikarakara ary manomboka mandamina! Raha manana olana momba ny mpikarakara trunk ianao dia aza misalasala mifandray aminay
teo aloha: Sarona seza tsara kalitao
Manaraka: Fiara Electrostatic Film Side Block
Boatin'ny Organizer Trunk